Getafe 1-0 Real Madrid: Enes Unal Oo Guul Daro Dhabarka U Saariyay Kooxda Los Blancos
HomeWararka CiyaarahaGetafe 1-0 Real Madrid: Enes Unal oo guul daro dhabarka u saariyay Kooxda Los blancos
January 2, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Spain 0
Real Madrid ayaa laga Hakiyay 11 kulan oo xidhiidh ah oo guuldaro la,aan aheyd horyaalka La Liga iyada oo gool uu dhaliyay Enes Unal ay Kooxda Getafe ku dubatay Real Madrid.
Gool uu daqiiqaddii 9aad ee bilowgii ciyaarta uu dhaliyey Enes Unal ayaa Getafe ugu filnaaday in saddex dhibcood ay ku helaan garoonkooda, isla markaana ay Real Madrid ka joojiyaan inay sii dheeraysato hoggaanka horyaalka oo ay siddeed dhibcood ku hayso.
Kubbad uu qaladkeeda lahaa Eder Militao ayaa uu ka faa’iidaystay Enes Unal oo goolhaye Thibaut Courtois shabaqiisa u dhaafiyey, waxaana dedaal kasta oo ay Los Blancos samaysay u babbac-dhigay difaac adag iyo goolhaye David Soria oo dedaal badan sameeyey.
Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 1-0 ay guushu ku raacday Getafe, halka Real Madrid ay hoygeeda ku laaban doonto iyadoo guul-darro uu ugu bilowday sannadka cusub.
Natiijadan ayaa waxay ka dhigan tahay in Getafe ay soo gasho kaalinta 16aad ee horyaalka LaLiga, ayna kasoo dallacday 17aad oo ay hore ugu jirtay, waxaanay yeelatay 18 dhibcood. Real Madrid ayaa iyaduna haysata 46 dhibcood, waxaana ka luntay fursad ay hoggaanka horyaalka 11 dhibcood ugu qaban lahayd.